Saika alefa aty Antananarivo Rongony 25 gony no tratra tany Ambalavao
Tratra tany Ambalavao Roalahy no voasambotry ny polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina tao Fianarantsoa saika hanondrana rongony marobe tao anaty gony hankaty Antananarivo.
Anjanahary Nalefa eny am-ponja ireo roalahy tratra nitondra antsy
Ny alin’ny 26 jona teo tokony ho tamin’ny 7ora, nandritra ny fisafoana nataon’ny polisy teny Anjanahary dia nahita lehilahy roa nijorojoro izy ireo. Tsikaritr’iretsy voalohany fa misy antsy any amin’ny iray amin’izy ireo.
Halatra moto Lehilahy miisa 4 no voasambotra tao Toamasina
Lehilahy miisa 04 no voasambotry ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny Commissariat Central Toamasina ny alatsinainy faha 29 jona 2020 tao amin’ny fokontany Tanambao Verrerie noho ny resaka halatra moto.
Salama tsara izy, ary mbola tsy misy kosa ny andinindiny feno mahakasika ny fahafahany. Nilaza moa ny zandarimariam-pirenena raha tsiahivina, fa ilay jiolahy raindahiny antsoina hoe Lama no atidoha, ary efa nisy olona 24 misy ifandraisana aminy nanaovana fanadihadiana. 200 tapitrisa ariary ny tambiny nampanantenain'ny fanjakana ho an'izay manome lohanarom-baovao hahafaha-misambotra azy.